I-SMT Technology - iPandawill Technology Co., Ltd
Ukuletha ukuguquguquka, ukuphendula, izidingo zekhwalithi enhle nezikhathi zokuhola, siyaqhubeka nokutshala imali kumishini emisha, izinqubo kanye nabantu bethu ababaluleke kakhulu. Ngemigqa emine ehlanganiswe ngokugcwele yejubane le-SMT yokukhiqiza okuyinhloko. Ulayini ngamunye unamaphrinta we-Desen othomathikhi kanye ne-oveni eyizoni eyi-8, exhunywe ngama-automatic conveyers kanye ne-loaders / unloaders, kanye nohlelo lwe-AOI oluku-inthanethi. Umshini wethu ungaphatha izingxenye kusuka ku-0201 resistors kuya kuhlu lwegridi yebhola (i-BGA), i-QFN, i-POP kanye namadivayisi we-pitch amahle kuze kufike ku-70mm2.
Ukuphrinta kokunamathisela kweSolder kuyinkqubo ebucayi, amaphrinta wethu we-Desen othomathikhi ayizuza ngokunembile nangokungaguquguquki, ngokuhlola okwakhelwe ngaphakathi okuzenzakalelayo kokuqinisekisa. Ukugcwaliswa kokunamathisela kweSolder kucutshungulwa ngokucophelela kusetshenziswa ama-oven we-8-zone convection.
I-SMT yethu izinqubo zisekelwa ngokugcwele onjiniyela abaqeqeshiwe be-IPC, besebenzisa imishini yobuchwepheshe yakamuva yokwenza ukusethwa kwenqubo nokuqinisekiswa. Yonke imihlangano ye-SMT ihlolwe nge-AOI kusetshenziswa amasistimu e-in-line AOI. I-X-ray iyatholakala nge-pitch enhle kanye nokuhlolwa kwe-BGA.
Ukulawulwa kwezinto ezibonakalayo kufaka phakathi ama-ovens okubhaka kanye nesitoreji esomile sokulungisa okulungile. Ngoba ukulungiswa nokuvuselelwa, iziteshi ezimbili zokuhlomisa ngokugcwele ze-pitch / BGA ziyatholakala.